Wafti uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada dowlladda Puntlland,Cabdi Faarax Juxa ayaa safar shaqo ku soo gaaray magaalada Dhahar ee xarunta Gobolka Haylaan. Wasiirka waxbarashada dowllada Puntlland ayaa waxaa socdaalkiisa ku weheliya wasiir ku xigeenka wasaarada waxbarashada Cabdullaahi Maxamed Bootaan waxaan ay safari ku soo kala bixiyeen degaano dhowr ah oo ka tirsan Gobolka Karkaar iyo Haylaan.
Wasiirka waxbarashada dowllada Puntlland iyo ku xigeen kiisa ayaa waxaa ku soo dhaweeyey duleedka magaalada Dhahar Guddoomiyaha Gobolka Haylaan Maxamed Faarax Ciise Jeentaro, gudoomiyaha waxbarashada gobolka Haylaan Cabdi Maxamed , gudoomiyaha Maxkamada Sare ee gobolka Shiikh Ibrahim Aadan Jaama.
Wafdiga wasaarada waxbarashada ayaa inta ay ku sugan yihiin Gobolka Haylaan waxaa ay kulamo gaar gaar ah la yeelan doonaa maamulayaasha goobaha tacliinta ,Odayaasha iyo maamulka Gobolka Haylaan si ay ugu kuur galaan cabashooyinka ay soo jeedinayaan goobaha tacliinta iyo weliba agabyada ay u baahan yihiin in lagu taageero.
Wasiirkawaxbarashada dowllada Puntlland Cabdi Faarax Juxa iyo wafdigiisi ayaa waxa kale oo ay booqdeen degmooyinka Xingalool iyo Baraagaha-Qol ee Gobolka Haylaan, wafdiga ayaa la filayaa in safar shaqo ay ku gaaraan Gobolka Sanaag. Socdaalka wafdiga wasiirka waxbarashada dowllada Puntlland Cabdi Faarax Juxa uu ku soo gaaray Gobolka Haylaan ayaa ah kii ugu horeeyey oo masuul ka tirsan wasaarada waxbarashadu uu ku yimaadaan Gobolka Haylaan iyo Sanaag.